कहालीलाग्दो घटना – Sourya Online
सौर्य अनलाइन २०७६ माघ २९ गते ७:४९ मा प्रकाशित
ललितपुरको सानेपास्थित निकै फराकिलो कम्पाउन्डसहितको अलिसान बंगलाभित्र गत सोमबार बिहान निकै कहालीलाग्दो दुर्घटना भयो । बंगलाकी मालिक्नी ४९ वर्षीया मुना कार्कीलाई उनकै श्रीमान्ले मृत अवस्थामा फेला पारे । साथै सोही बंगलामा विगत ९ वर्षदेखि घरेलु कामदारका रूपमा रहेका २२ वर्षीय विजय चौधरी पनि मृत अवस्थामा फेला परे । घरेलु कामदार चौधरीले मालिक्नी मुनालाई कुटपीट गरी मारेको र आँफूले पासो लगाएर आत्माहत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । घटना ज्यादै रहस्यमय छ । मृतक कार्कीका श्रीमान् अर्जुन कार्की वरिष्ठ इन्जिनियर हुन् ।
उनी लामो समय सरकारी सेवामा रही सचिवसम्म भएर केही वर्षअघि आवकास लिएका थिए । दोलखाको जिरीस्थित सामान्य किसान परिवारमा जन्मेका कार्कीले सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको छोटो अवधिमै आफ्नो आर्थिक हैसियतलाई निकै माथि पु¥याएका थिए । तर यो आर्थिक प्रगति नै उनका लागि अभिशाप बन्यो । उनका दुई छोरी अमेरिकामा छन् । श्रीमान् श्रीमती र १२ वर्षको छोराका साथ निकै अग्लो पर्खालले घेरेको फराकिलो कम्पाउन्डमा उनी बस्छन् । घरेलु कामदारले पिर्काले कुटिरहँदा उनी निकै चिच्याइन् होला तर फराकिलो कम्पान्ड र अग्लो पर्खाल भएका कारण त्यो आवाज छिमेकीहरूको कानसम्म पुगेन । हार गुहारसमेत नपाउने अवस्था बन्यो ।
यो घटना आफैँमा अत्यन्त पीडादायी , मार्मिक र विभत्स हो । जे हुनु भइसक्यो । यस्ता घटनाबाट अरूले पाठ सिक्नु जरुरी छ । पहिलो कुरा त राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्यवन गर्ने तहमा बस्नेहरूले बालश्रमलाई प्रोत्साहन दिएका रहेछन् भन्ने उजागर भएको छ । अर्को कुरा आलिसान बंगला , फराकिलो कम्पान्ड र अग्लो पर्खालले मात्रै सुरक्षा दिन सक्दो रहेनछ भन्ने कुरा उजागर भएको छ । यो घटना पहिलो र आश्चर्यजनक पनि होइन । अलिसान बंगलाभित्र आफ्नै नोकरद्वारा अकालमा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या राजधानी काठमाडौंमा उल्लेख्य छ ।
केही वर्ष अघि ललितपुरमा इसाई पादरी ग्याफ्नेको आफ्नै नोकरद्वारा हत्या भएको थियो । २०७५ भदौमा फ्रान्सका लागि नेपालका पूर्वराजदूत केशव झाको बबरमहलस्थित निवासमै हत्या भयो । हत्यारा सानुकान्छा तामाङ झाको घरमा १५ वर्षदेखि कार्यरत थिए । २०७४ साउनमा बूढानीलकण्ठ–१ मा पनि घरेलु कामदारकै योजनामा ५५ वर्षीया पार्वती ढकालको हत्या भयो । हत्यामा संलग्न थिए, नुवाकोट ककनी–२ का ३७ वर्षीय सुदाम लामिछाने ।
पूर्वडिआइजीपी हेमन्त मल्लका अनुसार आफ्नै घरका कामदारद्वारा मालिकको हत्या हुनुमा मुख्य कारण आर्थिक नै देखिने गरेको छ । त्यसपछि यौन, लागुऔषध र मनोवैज्ञानिक कारण देखिने गरेका छन् । यति ठूलो अपराध गर्ने हदसम्म मान्छे हत्पत्ति पुग्दैन । कि त दिमाग खुस्कनु प¥यो, नभए आपराधिक माहोलमा हुर्केको हुनु प¥यो । राज्यको जिम्मेवार तहमा बसेको व्याक्तिका घरमा बाल्यकालदेखि नै बसेको किशोर हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न हुनु भनेको गम्भीर कुरा हो । उसले असल संस्कार पाएन भनेर कसरी अनुमान गर्ने ? सम्भव भएसम्म घरेलु कामदार राख्न नहुने हाम्रो संस्कार हो ।
तर, अनिवार्य आवश्यकताका लागिभन्दा पनि सौखका लागि, अझ समाजमा रवाफ देखाउनका लागि घरेलु कामदार राख्ने प्रचलन बढेको छ । गरिब गुरुवाले रोजगारी पाउने भएकोले घरेलु कामदार राख्न कानुनद्वारा निषेध गरिएको छैन । बालश्रम प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । तर, पहुँचमा हुनेहरूले स्कुल जाने उमेरका बालबालिकालाई घरेलु श्रमिकका रूपमा राखेका छन् । एकातिर राज्यले उमेर पुगेका कुनै पनि बालबालिका विद्यालय जाने अवसरबाट बञ्चित नहोउन भनेर अभियान नै सुरु गरेको छ अर्कातिर सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा बसेका कतिपयले विद्यालय जानबाट बञ्चित गराइ आफ्नै घरमा बालश्रमिक राखेका छन् । पूर्व सचिव कार्की त उदाहरण मात्रै हुन् , उनी जस्ता सयौँ छन् हाम्रो मुलुकमा ।
अख्तियार र अदालतको विश्वसनीयता
पहिलो प्राथमिकता श्रमिकलाई
राप्रपा एकीकरणको सन्देश
सेवा कि अपराध ?
कोरोना उपचार कोषमा पूर्वराजाले २ करोड दिने
निजी अस्पताललाई सर्वोच्च अदालतको आदेश
लक्ष्य प्राप्त गर्ने तरिका
गरिब परिवारलाई खाद्यान्न सामाग्री वितरण
काठमाडौंमा खानेपानीको अभाव कम
कोरोना रोकथाम गर्न पाँचखालमा औषधी छर्कियो
आजसम्म कर्णालीमा कोरोना देखिएन
जिल्ला अस्पतालको आपत्ती
कोरोनाको संक्रमण र भूमण्डलीकरण
चीनले दिएकाे स्वास्थ्य सामग्री नेपाल आइपुग्यो
बुटवलको कोरोना अस्पतालमा एकको मृत्यु, रिपोर्ट आउँन बाँकी
उद्धारको नाममा पीडित विद्यार्थीबाटै ढाड सेकेर भाडा असुलियो